UBelly ngeveki ye-13 yokukhulelwa
Umama ozayo uya kutshintsha ubuso bomfazi ngaso sonke ixesha, kwaye ngeveki ye-13 yokukhulelwa, akusiyo wonke umntu onokufihla isisu. Okwangoku ixesha lokucinga ngeempahla eziphathekayo kunye neenkonkco, ezingayi kuzinqanda ukunyakaza nokuhambisa usuku olusakhulayo ngemini.
Ubungakanani besisu ngeveki 13 yokukhulelwa
Emva kokubuya kwakhona kwi-aphoyintimenti kunye nomntwana wakhe, umfazi oneminyaka eyi-13 ubudala uya kufumana ukuba yi-VDM. Ugqirha kuqala ulinganisa ukuphakama kokuma kwe-uterine fundus - ubungakanani obuvela phezulu kwithambo le-pubic kunye nangoko phantsi kwesibeleko. Ngoku kufuneka kube ngu-13 cm, oko kukuthi, lilingana nenani leeveki.
Ukuba kukho ukuphambuka kwaye kubalulekile, kunokuba kuyimfuneko ukuba ungene kwi-ultrasound ukuqinisekisa ukuba umntwana usulungile, kuba i-gap yentuthuko kunye nokukhulelwa okuphezulu kunokwenzeka . Ububanzi bentumbane ngoku u-10 cm. Ukongeza, ugqirha uyalinganisa umda wonke wesisu, oya kuba ngumntu ngamnye kumfazi ngamnye.
Isisu ngeveki ye-13 yokukhulelwa kwindoda encinci kunye nabafazi abagciniweyo, ngokuqinisekileyo, kuya kuba yinto eyahlukileyo, kwaye ootyhini abanomdla abazange babonakalise. Kodwa abafazi abakhulelweyo abanezifo eziqhelekileyo nezixhambileyo baya kuqaphela ukuba i-puzik ichazwe ngokucacileyo.
Enye into ekhathazayo ngabasetyhini abathile, xa isisu kwiveki ye-13 yokukhulelwa ayikhuli-ayikho nje. Ixesha lokumemeza i-alamu, kuba le ntokazi ayifumana ukuphazamiseka kwaye ayiboni ubungqina obubonakalayo bemeko yakhe.
Oku kunokwenzeka ngexesha lokukhulelwa kokuqala, kwaye isisu siya kubonakala kuphela ngeveki 16, nangemva koko. Abafazi abapheleleyo, nabo, abanakubona ukukhula kwesibeleko ixesha elide. Ingaba isisu sisabonakala kwiveki ye-13 yokukhulelwa kuxhomekeke kwi-placenta. Ukuba itholakala eludongeni lwangasemva - ke i-tummy iya kubonakala kamva, kwaye ukuba ngaphambili, emva kokuphela kwe-trimester yokuqala iya kubonakala ngokucacileyo.
Ukuvuza umniotic umbane okanye ukukhutshwa?
Cellulite ngexesha lokukhulelwa
Ukubeleka kwesibhedlele nokubeletha
Isondlo kwi-trimester yesithathu yokukhulelwa
Isebe lokukhubazeka kwabasetyhini abakhulelweyo
Amawele ahluke njani kumawele?
Proginova ngexesha lokukhulelwa
Iintlanzi zomlenze ngexesha lokukhulelwa
I-Doppler ultrasound ekukhulelweni - yintoni na?
Isifo sofuba nokukhulelwa
I-Toxicosis kwixesha elizayo
Uxinzelelo lwengqondo lwesisu ngokukhulelwa
Indlela yokuphakamisa umkhuhlane wengane?
Ifayile ephantsi kwe-aquarium
Iifoto ezingama-30, apho uza kubona ulonwabo kwimo yayo ecocekileyo!
Valley of windmills
Ijekethi yesibini - ukhetho lwezithombe zemifanekiso efake imfashini kuzo zonke izihlandlo
Numerology yenombolo yefowuni
Imisindo nobuso bomntu
Ibhasikidi ye-vanilla ngamanzi abilayo
I-Ultrasound yeempahla ezisezantsi
Iipulumu zeholo ngaphandle kwamakhethini
Iseshoni yesithombe sekwindla
Gqoka i-Case ngeBasque
Iipilisi zokukhula ngokukhawuleza
Abahlambululi bezitshixo ezizakhiweyo
Usuku lwehlabathi lwezilwanyana ezingenamakhaya
Iibhola ezisezantsi zezingane - senza ukhetho olufanelekileyo
Ziziphi iingenelo zamantonga ephayini zokuhle kunye nempilo?
Actinidia - ukutyala nokunyamekela